ကျော် … ညာ…. ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကျော် … ညာ…. ခြင်း
ကျော် … ညာ…. ခြင်း
Posted by etone on Jun 24, 2012 in Business & Economics, Critic, Myanmar Gazette | 42 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း white lie လို႕ ဆိုေလဦးမလား
မြင်ဖန်များလာတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုး ၊ ကြုံဖန်များလာတဲ့ အဖြစ်ပျက်မျိုးဆို လူသဘာဝအရ ရိုးအီသွားတတ်ကြပေမယ့် ….ကျွန်မကတော့ မြင်ရဖန်များလို့ ၊ ကြုံရဖန်များလို့ … မရိုးနိုင်ပဲ …ပွင့်အန်ထွက်ချင်နေတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ မြိုသိပ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ …. ဖွင့်ချပြလိုက်ပြီဗျို့ …. ။ တိုက်ဆိုင်သူတို့ကိုလည်း အားနာပါတယ် …. မေတ္တာပို့လျှင်လည်း ခံယူပါ့မယ် … ။ နေရင်းထိုင်ရင်း ပျားအုံဒုတ်နဲ့ ထိုးတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် ကာစတန်မာတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့နည်းလမ်းက .. ပရိယာရ်လွန်ကဲသွားပြီး လိမ်ညာမှုသဘောဘက်သက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာလေး သိစေရုံလောက်ပါ …. ။
မြို့လည်ခေါင်နဲ့ လှည်းတန်းလို လူစည်တဲ့နေရာမျိုးက လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆိုင်(ဘာဆိုင်လဲဆိုတာ …ဆက်စပ်တွေးကြည့်ကြပါ ။ ) တချို့ရဲ့ …. လိမ်လည်ဆွဲဆောင်နည်းကို စပြောပါမယ် ။ ဘာတဲ့ … ဂိုထောင်ရှင်းစနစ်တဲ့ …. ။ ဂိုထောင်ရှင်းစနစ်နဲ့ ဒီဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ကာလကနေ၊ဘယ်ကာလအထိ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များလျော့ပေးမယ်တဲ့လေ …. ။ နာမည်ကြီး Branded မျိုးစုံကို သက်သက်သာသာရမယ်ဆိုတော့ … လူတွေလည်း ကြိတ်ကြိတ်တိုးလိုက်ကြတာပေါ့ …. ။ တကယ်တော့ ဘာနာမည်ကြီးကို ဂိုထောင်ရှင်းလို့ ငွေပေါ်အောင်ရောင်းပေးတာမဟုတ်မှန်း အဲ့ဒီဆိုင်နာမည်နဲ့ဆိုင်ခွဲတွေ လူစည်ကားရာနေရာမှာတွေ့လာတဲ့အခါ လူတွေ သဘောပေါက်သွားတော့တယ် … သူတို့ရောင်းတဲ့ branded ဆိုတာတွေကလည်း made in China က တထပ်တည်းဖြစ်အောင် ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါ … ။ ပစ္စည်းအစစ်မသုံးဖူးသူတွေကတော့ တကယ့်ကို သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့လျော့ပေးတာလို့ပဲ ထင်ကြတော့တာပေါ့ ။ တရုတ်ကလည်း တထေရာတည်းတူအောင် ထုတ်ထားတာပါ .. အသုံးပြုတဲ့အခါကျမှ … branded သုံးသူက …. သိပါတော့တယ် …. ။ မျက်စိနဲ့တောင် ခွဲမရအောင် တူလွန်းပါတယ် …
နောက်တစ်ခုကတော့ … လူစိတ်ဝင်စားအောင် ဟန်ဆောင် ကြေငြာခြင်းလို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ရမလား … လူစည်ကားရာနေရာက အလှကုန်ဆိုင်လေးတွေလေ …။ ပစ္စည်းတမျိုး ၅၀ဝကျပ် ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေပါ …. ။ စပ်စပ်စုစု ပေါချောင်ကောင်းရချင်စိတ်နဲ ့ဝင်သွားကြည့် … အဲ့ဒီ ၅၀ဝဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေက ကိုယ့်အတွက်မသုံးမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူး ။ မူရင်းဈေးကိုကအဲ့ဒီလောက်ပဲတန်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေချည်းပဲ … ။ တစ်ထောင်တန်လောက်ကို ငါးရာနဲ့ရောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ….. တစ်ချို့ ပစ္စည်းတွေ ငါးရာထက်ပိုတန်တယ်…. အဲ့ဒါမျိုးဆိုင်မှာတင်ထားလျှင် …. ကြော်ငြာသလို ငါးရာနဲ့ရလားမေးကြည့် … မရပါဘူး………သူ့တန်ကြေးအတိုင်းရောင်းတာမျိုး…. ပြောရလျှင် အဲ့ဒီလို ဆိုင်တွေမှာ ငါးရာတန်ပစ္စည်းက အမျိုးစား နည်းနည်းပဲ ရှိပြီး တခြားတန်ကြေးနဲ့ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေကပိုများနေတာပါ … ။ ဒါဆိုကာစတန်မာကို သက်သက် လူလည်ကျပြီး ဆွဲဆောင် ၊ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ ဈေးရောင်းနည်းတမျိုးပါပဲ … ။ မယောင်မလည်နဲ့တော့ တခါလောက်တော့ ဝင်မိကြမှာပေါ့လေ .. အထင်နဲ့အမြင်လွဲနေတဲ့အခါ နောက်ပိုင်းခြေဦးတောင် မလှည့်ကြတော့ပါဘူး … ။ ကာစတန်မာရဲ့ အချိန်ကိုလုပြီး စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သလို ခံစားမိပါတယ် ။
နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ် ….မြို့ထဲက ဆောက်လုပ်ဆဲ …ကွန်စထရက်ရှင်းတစ်ခုမှာ ဗွီနိုင်းထုတ်ရေးထားတဲ့ ရောင်းရန်တခန်းသာ ကျန်ပါတော့သည်ဆိုတဲ့ စာသားကလည်း ….. နှစ်ပေါက်တဲ့အထိ ရေးထားစဲပါပဲ … ။ မြို့လည်ခေါင် အချက်ချာကျတဲ့နေရာမျိုးမှာ ကွန်ဒိုဆောက်ပြီးအခန်းရောင်းတာ .. တခြားအခန်းတွေတောင်ရောင်းထွက်သေးတာ .. ဒီတစ်ခန်းနှစ်ပေါက်အောင်တော့ ရောင်းမထွက်တာ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်မိတယ် …(တကယ်လည်းရောင်းမထွက်တာဟုတ်လျှင်ဟုတ်မှာပေါ့လေ .. ဟိ) ဒါမှမဟုတ် …. ကြော်ငြာဗွီနိုင်း ပြန်ဖြုတ်ဖို့ မေ့နေလို့လား ၊ ဖြုတ်ရက်လို့ ငြမ်းဖျက်မှပဲ ဖြုတ်တော့မယ်တဲ့လား …သို့လားပေါင်းများစွာနဲ့ ပဟေဌိဖြစ်မိပြန်တယ် …။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတဲ့ … လက်တွန်းလှည်းထီဆိုင်လို တစ်ဆောင်ပဲထုတ်တင်ထားပြီး ..မှန်တတ်တဲ့ ကျန်ဖြတ်လေး ဘာညာဆိုကြော်ငြာ … အဲ့ဒီကျန်တဲ့ တစ်ဆောင်ရောင်းလိုက်ရလျှင် … နောက်တစ်ဆောင်ထပ်ထုတ် … အဲ့လိုအော်တာလေး ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်ခဲ့ဖူးတာ .. ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်သတိရခဲ့မိတယ် … ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း BUY ONE ,GET ONE လို့ရေးထားတာကို …. တစ်ခုဝယ်လျှင် ၊ တစ်ခုလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သွားမိတာ … မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ် … အဲ့ဒီအကြောင်းကို ပို့စ်လေးတင်တော့ ….. အချိန်အတော်ကြာထိ အဲ့ဒီဘရန်းဘက်က …မဖတ်မိခဲ့ကြဘူးလေ …. ။ နောက်ပိုင်း အဲ့ဒီဘရန်းက ဖေ့စ်ဘွခ်ထောင်တော့ …. ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ရဲ့ လင့်လေးကို သူတို့ ဝေါမှာ သွားချန်ခဲ့ပါတယ် … ဖတ်မိအောင်ပါ …….. အဲ့ဒီတော့မှ … ဘရန်းဘက်က ဝင်ပြီးပြန်လာရှင်းခဲ့တာလေး … အမှတ်ရရှိဖူးပါတယ် … ။ white lie ပါတဲ့ … ။
ရောင်းသူရော ၊ ဝယ်သူပါရှိမှ ဈေးကွက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာမှာပါ …။ ရေရှည်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းမျိုးဆို … ကာစတန်မာကို လှည့်စားစွာဆွဲဆောင်ခြင်းထက် ၊ ရိုးရှင်းပြီးဆန်းသစ်တဲ့ သွင်ပြင်နဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းမျိုးကသာ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပါ … ။ ယုံကြည်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှာကြောင့် ကာစတန်မာကို အရူးလုပ်သလိုဖြစ်မယ့်နည်းမျိုးမသုံးသင့်ပါဘူး ….. စေတနာထားပြီးရောင်းသူ ၊ ဝယ်သူ အသံတူမှသာ …. တည်တံ့တဲ့ ရေရှည်စီးပွားရေးမျိုးဖြစ်လာနိုင်မှာပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေး …. ပေါ်ပင် တနပ်စားကြံတဲ့ဆိုင်တွေများလာတာကို အလိုမကျတဲ့ကျွန်မက….စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ စေတနာတို့အရင်းခံပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ရွာသူရွာသားတို့လည်း ….စိတ်အလိုမကျမှုများ ၊ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခံရမှုများမှ ကင်းဝေကြပါစေနော် … ။ ။
မှန်တယ် မအီးတုံးကို အပြည့်အဝထောက်ခံတယ် ဆိုင်တွေက Customer always right ဆိုတာကို သူတို့ နားမလည်ဘူး အနော်လဲကြုံဘူးတယ် နေ့တိုင်းလိုလိုပဲ ဘီအီးဆိုင်တွေ ရေသိပ်ရောတယ် ပြောရင် မကြိုက် ဘူး မအီးတုံး အဲဒီကိစ္စလည်း ပို့စ်တစ်ခု ရေးတင်ပေးပါဦး အနော် မရေးတတ်လို့း)
သေချာပြန်စစ်ရင်တော့ လူစိတ်ဝင်စားအောင် လိမ်ငြာဖြားယောင်းတယ် ဆိုကတဲက ပင်ကိုက အရည်အသွေးမရှိလို့လို ့ထင်ပါတယ်ဗျား..
ဝယ်သည်မဝယ်သည်က ကိုယ့်အပိုင်းပေမဲ့..ကိုယ်တွေအတွက် အချိန်တော့ အနည်းလေးပေးလိုက်ရတာပေါ့..
စိတ်ချမ်းသာသလို လုပ်စားကြပါလေ..ဘားမှဝင်စွက်ဖက် ပြောဆိုခြင်းအမှု မပြုလိုတော့ပါဘူး..
သူလေလဲ လောကီသားပေပဲမို ့…
ဘာဒွေလဲတော့ သိဘူး…ပြောချင်ရာပြောပြီး ပြန်ပါတော့မယ်နော..
A lot of advertisements are,therefore ,a form of lying.
မှန်ပါ့။ သူ့ဆိုင်လူဝင်အောင် မဟုတ်ကဟုတ်ကဈေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်တာလေ။ မြန်မာလူမျိုးကလဲ အင်မတန် အားနာတတ်တာကလား။ ဝင်ပြီးရင် မဟုတ်ရင်လဲ အားနာပါးနာ တခုလောက်တော့ဝယ်သွားတာပဲဆို တော့ သူတို့ကလဲ ညာလို့ကောင်းနေတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အမလဲနောက်ဆို အဲလိုကြော်ငြာထားရင်မဝင်တော့ တာများတယ်။
ဝှိုက်လိုင်း တွေ ကို အရမ်း သောက်မြင်ကပ်တယ်
ဝှိုက်ဝိုင် ကိုတော့ အရမ်း ကြိုက်တယ်
ကျော်အောင် ညာကြတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ချဉ်ပေါက်စရာတခု ပြောချင်သေး
၄x၆ တစ်ပုံ ၇၅ ကျပ် လို့ ကြော်ငြာကပ်ထားတယ်..
ကိုယ်က တကယ်မှတ်လို့ ၁ပုံ ၂ပုံ ဝင်ထုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့
တစ်ပုံကို ၂၀ဝ ဆိုပြီး တောင်းတယ်
ဘာလို့ ၇၅ ကျပ်ရေထားလဲ မေးတော့ အဲဒါ ၅ ပုံနဲ့ အထက်ဈေးပါ လို့ ဆိုတယ်
တကယ်ဆို အစတည်းက ရေးထားပေါ့ဗျာ ကျော်ညာထဲမှာ..
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်တွေ “ ကျော် ညာ” ပုံက အိမ်တန်ဖိုး ဘေးမှာ အလွှာရေးတယ်။
+++ သိန်း G F လို့ရေးထားတယ်။
( G F ) မြေညီထပ် ကို ဒီဈေးနဲ ့တန်လို ့ဖုန်းဆက်မေးမယ်မကြံနဲ ့။
စာရိုက်တဲ့သူမှားလို ့ပါ။ ( G F ) မြေညီထပ် မဟုတ်ပါဘူး။
(6F ) ခြောက်လွှာပါလို ့ပြောပြီး ရောင်းဖို ့ရှိတဲ့ အိမ်တွေတန်းစီရွတ်တော့တာပဲ။
ဖုန်းခ သူတို ့ကုန်တာမဟုတ်ဘူးလေ။
ဖုန်းခ မကုန်တဲ့ “ ကျော် ညာ” နည်းပေါ့။
တီချာတို့ ကိုကလည်း လျှော့ဈေးဆိုရင် လည်ပြန်ချင်ချင်ရယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အလိမ်ခံရတာနည်းသေးထင်ပါရဲ ့။
ကဖိုးထောင်ရေ …BEဆိုင်ကတော့ …. မိုးလားကဲလား မကြော်ငြာထားပါဘူးနော် …သောက်သုံးသူတွေအတွက်စေတနာထားပြီး … အသေမစောအောင် ရေရောပေးတာ ….ဝေဖန်ပြီးရေးစရာလားလို့ ..
စိန်ပေါက်ပေါက်ပြောသလိုပဲ …ကိုယ်ပိုင်အရည်သွေးမရှိလို့ ဖြစ်မှာပေါ့လေ .. ဟိ
လူဆိုတာမျိုးကလည်း …လျော့ဈေးဆိုလျှင် သိပ်ကြိုက်တတ်ကြတာဆိုတော့ … သူတို့ ဂွင်ထဲဝင်မိတာ ခဏခဏပါပဲ … ။ အဲ့လို ဝင်မိတဲ့ လူတွေကြားထဲ အားနာပါးနာနဲ့ ဝယ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ် … ။
ကိုသန်းထွဋ်ဦးပြောသလိုပါပဲ …. A lot of advertisementsတွေက …ကြော်ငြာတာနဲ့ မတူပဲ ကျော်ညာတာဖြစ်တော့မယ် ….
အစ်မသဲရေ … အမျိုးသမီးထုအများစုက အိမ်သုံးစရိတ်ချွေတာချင်ကြတယ်လေ … ပိုထွက်လာတော့ တခြားနေရာလေးဖြည့်ဝယ်လို့ ရတာကြောင့်လည်း ပါတယ် … ။ တတ်နိုင်သမျှ ဈေးသက်သာချင်တာ ယောကျာ်းတွေမှာရော မိန်းမတွေမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ဆန္ဒမျိုးပေါ့ …. ။ ဒီတော့လည်း ….ပျော့ကွက်ကိုနင်းပြီး စီးပွားရှာသူတွေ ရှိလာတော့တာပေါ့ … ။ ဝင်သွားပြီး .. အထင်နဲ့ အမြင်လွဲနေလျှင် …မဝယ်ပဲ ပြန်ထွက်လာရဲတဲ့ သတိ္တတော့ ရှိဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်အစ်မရေ ။
ကပေ …. အကြံချင်း တူပါတယ် ဟိဟိ … white lieတွေကိုမုန်းပြီး ဝှိုက်ဝိုင်ကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ် … ခွိခွိ ဒါနဲ့ ..ပြည်တွင်းဖြစ် ဝှိုက်ဝိုင်(ရှမ်းပြည်)ဘက်က လာတဲ့တံဆိတ် .. ဘာလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး… အဲ့ဒါလေး အတော်ရောင်းနေရတယ် … ဖိုက်စတား ဟိုတယ်တချို့မှာတောင် …. အဲ့ဒါတင်ပြီး သုံးနေတယ် … ။ ဈေးကလည်း သင့်တယ် … ။ အရသာလည်း ကောင်းတယ် ။
ကိုရွာစားကျော်ပြောတဲ့ ဓါတ်ပုံကိစ္စကတော့ သက်သက်လူလည်ကျတာပါ … နားလှည့် ပါးရိုက်လုပ်ချင်တာမျိုးလို့ ယူဆပါတယ် … ။ စားသုံးသူကို ဒီလို လုပ်တာကတော့ .. ဘယ်တော့မှ ဒီလုပ်ငန်း ယုံကြည်မှုမတည်ဆောက်နိုင်ပါဘူး … ။ ရေရှည်မိတ်ရဖို့ .. သိသာသွားပါလိမ့်မယ် .. ။
the bestရေ … ဗဟုသုတမှတ်သားစရာနောက်တစ်ခု တိုးပြန်ပါတယ် … ။ ဒါမျိုးလည်း ရှိတာကိုး ။
ကိုယ်တိုင်က … လူနေအိမ်မပြောနဲ့ .. စာကလေးအိမ်တောင် မဝယ်နိုင်တဲ့ အနေထားမို့ … ဒီလို ပြသနာတော့မကြုံဖူးပေမယ့် … အခုလို သိရတော့လည်း … သူတပါးကို လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြပေးလို့ ရတာပေါ့လေ … ။ အတွေ့ ကြုံဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ ။
တီချယ်ကြီးရေ .. လျော့ဈေးဆိုလျှင် … လိုချင်ကြတာ … လူတိုင်းနီးပါးပါပဲ … ။ ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်လျှင် ဘယ်လောက်ဖိုးပြန်ပေးတယ် .. ဘာလက်ဆောင်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကို မက်လို့ .. ခံရတာ ခဏခဏပါပဲ … ။ ခဏခဏခံရလို့ မဝယ်တော့ဘူးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး …. မေ့လောက်တဲ့အချိန်ကျလျှင် ထပ်ဝယ်တာပါပဲ … ။ တလောက ဂမုန်းပွင့်မှာ စနေတနင်္ဂနွေတိုင်း သုံးသောင်းဖိုးဝယ်လျှင် ဗလာမပါကံစမ်းမဲဆိုတာကို မက်လို့ … မပြည့်ပြည့်အောင်ဖြည့်ဝယ်တယ် ..နောက်လဲကျရော ..ပြန်ရတော့ ငါးရာတန် … အဝတ်ပျော့ဆေး … အဲ့ဒါလည်း အမှတ်မရှိပါဘူး..ကော်ဖီမစ် ဘယ်နှစ်ပါကင်ဆို ခွက်တလုံးဆိုလည်း လိုချင်ပြန်ရော … ။ ကြော်ငြာကလည်း ကြော်ငြာပေါ့ .. ကိုယ်အသုံးမကျတာလည်း ပါတာပေါ့ .. အဟီး .. ရှက်ထှာ
တီချာရေ အင်တာနက်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာ မိန်းမတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး စကားနှစ်ခွန်းပဲရှိတယ်တဲ့ အဲဒါက…
2) 50% discount
ကျော် အောင် ညာ တဲ့ လုပ်ငန်း တွေ ကတော့ နေရာ တိုင်းမှာပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ နည်းတွေ က တစ်ခါစားပါဘဲ။
ဝယ်သူ တွေက လဲ ပေါချောင်ကောင်း ဆို တာကို စဟာနေတာ များ သကိုး။
ဒီမှာ ၉၉ပြား ဆိုင် တွေ ရှိတယ်။
အများအားဖြင့် အိန္ဒိယ တိုင်းသား တွေ ဖွင့်တာပါ။
တစ်ချို့ ပစ္စည်းအရည်အသွေး က တစ်အားကို ညံ့တယ်။
တစ်ခြားမှာ ပြား ၂၀/၃ဝ ပိုပေး ရင် ပိုကောင်း တဲ့ ဟာ ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျပန်မှာ လဲ ယန်း၁၀ဝ ဆိုင်တွေ ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်လောက်က အဲဒီ က ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းစည်းကြိုး တွေ အခု ထက်ထိ ကို ကောင်းကောင်းကြီး သုံးနေရတုန်းဘဲ။
အရည်အသွေး က စံချိန်မှီ တယ် ပြောရမလားဘဲ။
တရုပ်ပြည် ရွှေလီက အတုခိုးယူကြတာ။
ကြိုက်တာယူ 2ကျပ် ကြိုက်တာယူ တစ်ဆယ်
သူက ဝိနည်းလွတ် အမျိုးတူ တစ်ရံပေးတာမဟုတ်ဘူးလေကွယ်.
ဘတ်စ်ကားတွေ အကြောင်းနဲနဲ ပြောကြည့်မယ်။ ဝူး … ဝရော … ဆရာရေ ခဏလေး… တက်တက်မြန်မြန်တက် ထွက်တော့မှာ .. ကျွန်တော် လဲ ခဏလေးပါဗျို့.. လိုက်ဦးမယ် ဗျို့အော်ပြီး ပြေးတက်တာပေါ့ .. အပေါ်လဲရောက်ရော .. ထွက်လဲ မထွက်ပဲ နဲ့ နောက် ၁ဝ မိနစ် လောက် ရပ်စောင့် လိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒီ့ 10 မိနစ်လုံး ကားပေါ်ကလူတွေ က တစ်ယောက် ထပ်ထိ ပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်တာလဲ အောင့်သက်သက် ဖြစ်သလို …. ထွက်တော့မှာ ဆိုပြီး အညာခံ ရတဲ့ ကိုယ့် ကိုကိုယ် လဲ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရင်း ….
ကားဈေးကျတာ မကျတာထက် ကုန်စည် စီးဆင်းမှု နဲ့ သွားလာရေး အဆင်ပြေ ဖို့ လိုင်းကားတွေ စည်းကမ်းတကျ ရပ်.တင်.မောင်း နဲ့ အချိန် တိတိကျကျဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျို့……။ ကားဈေးကျအောင်လုပ် … လူလတ်တန်းစားတွေရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ တံတားကြီးတွေပြီး သွားရင်လဲ ..ဒီလို လိုင်းကားမျိုးတွေ ရှိနေဦးမယ် ဆို … ကျွန်တော် တို့လို အောက်ခြေလူတန်းစားတွေရဲ့ အချိန်တွေလဲ … ကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေဦးမှာ ဆိုတဲ့ ………….. အကြောင်းလေး …။
သူတို့ဂိုဒေါင်ကလည်း ရှင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူး တကယ်
ကိုဂီ အဲ့ဒါ မားကတ်တင်းစတွက်ဒဂျီထဲဝင်လား
အင်ထု တစ်နပ်စား တစ်ကွက်ရိုက်အရောင်းသပ်သပ်ပဲလား
အူးဗိုက် စောစောစီးစီး ဒီအချိန်ကြီး
ဘာမှ မားကတ္တင်း စွက်ဒက်မဂျီဝူး …
ဘယ့်နှယ့် …ဆေးလ်စ်တွေ ပေါက်ပန်း၄ဝ လုပ်တိုင်း..
အရူးကွက်နင်းတိုင်း ကျုပ်တို့ မားကတ္တင်း ခေါင်းပဲ တက်တက်
တကယ်တော့ ..မားကတ္တင်း မှာ လုံးဝ မလွယ်တဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေ
ရှိတယ်…။ အထူးသဖြင့် စွက်ဒဂျီ ပိုင်းတွေမှာ ….။မားကတ္တင်း
စွက်ဒဂျီ ၊ မားကတ္တင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်.. မားကတ္တင်း ..တက္ကတစ် ဒါတွေကို အတိအကျ မခေါ် ဘဲ ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ် မားကတ္တင်းလို့ပဲ ခေါ်ကြပြောကြတော့… လူတွေက ရပ်ကွက်ထဲ ဈေးလှည့်ရောင်းတဲ့ ဟိုချာတိတ်မလေးတွေနဲ့ တတန်းထဲ သွားမြင်ရော …။ အဲ့သည့်မှာ နားကားတာပဲ …
ဘယ့်နှယ့် MI(marketing intelligence), MR(marketing research)
ဆိုတာတွေကို ဘာမှန်းမသိသူတွေ က အလုပ်ရှင်
ဖြစ်နေကြတာ (သိချင်လည်းသိမယ်.. .သိလျက်နဲ့ နှက်နေတာဆိုရင်တော့
ပိုဆိုးသွားပြီ) သိပ်တော့ ကောင်းတဲ့ အလားအလာတော့မဟုတ်..
ဒလဝမ် ကို ယဉ်ကျေးစွာ လုံခြုံရေးမှူးလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အလုပ်ခန့်တယ်.
အဲ … ဆေဲးဂဲလ် ဆိုရင် ရိုင်းရာကျမှာ စိုးလို့ … မားကတ္တင်း ရီပီရီဇန်တေးတစ်ဗ်
ဘာညာ သာဒကာ ဆိုပြီး တပါတ်လှည့် ပီး ခန့်တယ်…
ဝန်ထမ်းကလည်း ခိုင်းတာလုပ် ..ထားရာနေ စေရာသွား ….
ခပ်တည်တည် …အဲ့ဒါဂျီးကို မားကတ္တင်း ထင်နေ….
ပြောရရင် ဆေးလ်စ် က နေ မားကတ္တင်းဖြစ်လာတာ ရှိသလို
မားကတ္တင်းကနေ ဆေးလ်စ်ဘက်သွားတဲ့ ပရိုတွေလည်း ရှိရဲ့ ….
အရည်အချင်းပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ သီးခြားသော တောင်းဆိုမှု ရှိပါတယ်…။
ပရိုပိုပီလာလေ ပိုခက်လာလေပါပဲ ….။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ..AMA(American Marketing Association) နဲ့
CIM (Chartered Institute of Marketing) တို့လို leading marketing association
ဒုတိယတခုက UK ပါ … ကျုပ်တို့ ဂိုဏ်း ဆိုပါတော့ …။ အဲ့သည့်မှာ the Marketer Magazine ဆိုတာ ရှိလေရဲ့… တပါတ်တိုင်း မေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက်လောက်တဲ့
အာတီကယ်တွေ ပါတတ်ကြောင်း ……။
ဟဲ့…ဟဲ့ အကုန်မပြောနဲ့ဟဲ့ ဂီမရဲ့ နာတို့စားပေါက်တွေပိတ်ကုန်မယ်…
အင်း… စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး…. ဆိုလား သူညားတွေပြောဒါဘဲ
ပြင်ညာ တွေလေ. ..ပြင်ပြင်ပီး ညာ စားနေတာ …ဟီး..
အဲဒါဘယ်သူ.အမှားလဲ သိလား မအိတုံ နားလှည့်ပါးရိုက်ရောင်းတဲ့သူအများမဟုတ်ဘူး ပေါချောင်ကောင်းလိုချင်တဲ့သူတွေ အမှား……….
ဘယ်တော့မှာ ပေါချောင် ရင် မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိရက်သားနဲ. ဝယ်နေတဲ့သူတွေရှိလို. အဲလို ညာရောင်းတဲ့သူတွေ ပေါနေတာ……. ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဒါလေးပါပဲ….ဒါပါပဲ ဒါလေးပါပဲ……..
တကယ့်ကို အမှန်ပဲ etone ရေ …
အဲဒီဖိနပ်ဆိုင်ကလည်း ဂိုထောင်ရှင်းနေတာ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်အောင် …
သွားကြည့်ပြန်တော့လည်း ဖိနပ်တွေက အကုန်အတုတွေချည်းပဲ …
ယောင်လို့တောင် တစ်ရံတစ်လေ အစစ်တစ်ရံလောက်တောင် မတွေ့ဖူးဘူးပဲ …
ဟဟ နာမည်ကိုက ဦးဦးပါလေရာပဲလေ
ဟုတ်တယ်အိတုန်ရေ နာမည်ကိုကကျော်ညာတဲ ့
ဒါကဒေါ့ ဒီလိုပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေဂျဒါဗဲ အီးဒုံးဂျီးရဲ့… opening sales, grand opening sale, close out sales, everything must go sales, discount sales, promotion sales, bargain sales…….။ တချို့ဆိုင်တွေများ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအရောင်းဆိုပီး ဗီနိုင်းပိုစတာထောင်ထားလိုက်တာ နှစ်လုံးပေါက်… စည်ပင်သာယာက လာမပြောတဲ့အထိဗဲ….။ ဥပဒေအရ လက်တလုံးခြားလုပ်ချင်ရင် ပိုင်ရှင်လက်ပြောင်းလက်လွှဲ ခဏခဏလုပ်ပီး ဥပမာ – အီးဒုံး ဆပ်ပြာမွှေးရောင်းဝယ်ရေး၊ အေကေကေအို ဆပ်ပြာမွှေးထရေးဒင်း ဂလိုဂလို ရိုက်စားလုပ်ကြတယ်…။ အဲဒါ ဗာဖြစ်သလဲ အီးဒုံးဂျီးရဲ့..မကျေနပ် မဝယ်နဲ့ မျက်စိမှိတ်ထားပေါ့…။ သူကြတော့ ဆေးခန်းမှာ မိုးရေကို ပင်နီစလင်ဆိုပီး ဆေးထိုးအပ်တလုံး လူနာဆယ်ယောက် ထိုးပေးနေပီးဒေါ့…. :eek:
အာ .. ဦးမိုက်ကြီးကလည်း … ဒီတစ်ခါတော့ သမီးခံလာရတာ မဟုတ်ပါဘူး … ။
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်ရင်း မြင်နေရာက … ၊ အဲ့ဆိုင်တွေရောက်ပြီး တောက်တခေါက်ခေါက်ပြန်လာသံတွေ ကြားနေရာက ရေးလိုက်တာ … ။
သမီးခံလိုက်ရတုန်းက .. Buy One Get One တုန်းကပဲ .. အဲ့တုန်းကလည်း .. တန်အောင် တပုဒ်တင်ပလိုက်သေးတယ်.. ဟိဟိ
လူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်နပ်စားလုပ်ကြတာပေါ့.. လျော့ဈေးဆိုတာနဲ့တင် အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေက အနည်းဆုံးတော့ဝင်စပ်စုလိုက်တာပဲ… ကျမ အော်ဇီမှာတခေါက်ခံလိုက်ရတာကတော့ ကြာသပတေးနေ့မှာ စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်း 1AUD နဲ့ ၅ကွင်းပေါ့… တခြားပစ္စည်းတွေ လည်းအဲလိုပဲ…သူတို့ငွေ နှစ်ဆယ်.သုံးဆယ်နဲ့စိ်န်ထည်ေ်ရွှေထည့်တွေကို …အရေအတွက်အကန်ု့ အသတ်နဲ့ ရောင်းပေးမယ်ပေါ့…တန်းစီပြီး ၅ယောက်တစ်စုပဲပေးဝင်တယ် ..အထဲရောက်တော့ သူတို့ဆီက ၉ကာရက်လောက်ပဲရွှေရည်ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းဟောင်းတွေက အနည်းဆုံး ရာဂဏန်းတန်တွေပဲဖြစ်နေတယ် ..နောက်ပစ္စည်းတွေကလည်း လိုချင်စရာတစ်ကွက်မှ မရှိဘူး.. အပြင်မှာ ကပ်ထားတာကိုမေးတော့ အဲဒါက နောက်အပတ်မှရောင်းမှာပါတဲ့.. ထပ်တော့မသွားဖြစ်တော့ဘူး.. ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်..အဲဒီမှာနေတဲ့အစ်မတွေကို အဲလိုမျိုးတကျပ်နဲ့ရဖူးလားဆိုတော့ သူတို့တော့ တခါမှမရဖူးဘူးတဲ့..
တန်ုလို့ ဆိုပီး သွားပီး တော့မဝယ်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ တွေ့ကိုတွေ့ရတယ် ခုခေတ် ကလူလည်တွေကများနေတယ် ဂိုထောင်မှာ သိမ်းထားတာ ကကြာ date တွေကိုသွားကြည့်တော့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ ချိန်မှာdateကပြည့်တော့မယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်ခင် အမြန်ရောင်းထုတ် လူလည် လုပ်နည်းတမျိုးဘဲ လည်သူစားပေါ့ မလည်သူခံပေအုံးပေါ့လေ ပိုက်ဆံအကုန်မခံဘဲနဲ့ ကိုယ့်သုံးနေကျပစ္စည ်း လေးကိုဘဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့တိုင်းတာပီး လောက်မယ့်ပစ္စည်းမျိုးလေးဘဲ သုံးတာကောင်းပါတယ် သူများလိမ်တာလည်းမခံရအောင် ဈေးသက်သာတယ် ဆိုလည်းကိုယ်မဝယ်မိအောင်နေရမယ်
တန်ုလို့ ဆိုပီး သွားပီး တော့မဝယ်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ တွေ့ကိုတွေ့ရတယ် ခုခေတ် ကလူလည်တွေကများနေတယ် ဂိုထောင်မှာ သိမ်းထားတာ ကကြာ date တွေကိုသွားကြည့်တော့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ ချိန်မှာdateကပြည့်တော့မယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်ခင် အမြန်ရောင်းထုတ် လူလည် လုပ်နည်းတမျိုးဘဲ လည်သူစားပေါ့ မလည်သူခံပေအုံးပေါ့လေ ပိုက်ဆံအကုန်မခံဘဲနဲ့ ကိုယ့်သုံးနေကျပစ္စည ်း လေးကိုဘဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့တိုင်းတာပီး လောက်မယ့်ပစ္စည်းမျိုးလေးဘဲ သုံးတာကောင်းပါတယ် သူများလိမ်တာလည်းမခံရအောင် ဈေးသက်သာတယ် ဆိုလည်းကိုယ်မဝယ်မိအောင်နေရမယ် ။
Singapore ရောက်ရင် မြန်မာတွေ သွားတတ်တဲ. 2s$ တန်ဆိုင်တော. Junction square မှာလာဖွင်.ထားတယ်နော်။ ဘာယူယူ ၁၈၀ဝ တဲ.။ အဲဒါမျိုးလေးတွေကတော. မဆိုးဘူးလားလို.။ Quality အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေပါ။ ဟိုမှာလိုတော. အကြီးကြီးမဟုတ်ဖူးပေါ.။ ဟိုမှာလို စုံစုံလင်လင် တင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။
တော်တော်ကြီးတဲ့ဂိုထောင်ဖြစ်မယ်၊ ရှင်းလို့ကိုမကုန်နိုင်တော့ဘူး။ မြေနီကုန်းမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုး ဂိုထောင်ရှင်းစနစ်တဲ့ ဆိုတဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်တဆိုင် နှစ်ချီနေပြီ။ လိမ်လည်ဆွဲဆောင်ပြီးရောင်းနေတုံးပဲ။
အဲဒီဆိုင်ကတော့ မျက်စိနောက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ။ သူ့ဂိုဒေါင်ကလည်း ရှင်းလို့ကို မဆုံးတော့ဘူး။
နောက် ရှိသေးတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းနဲ့ ဒလကူးတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ။ ၄ မျိုး ၁၀၀ဝ ဆိုလားပဲ။ fair & lovely ဘူးရယ်၊ ရေမွှေးရယ်၊ ပေါင်ဒါဘူးရယ်၊ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဘာလဲမသိတော့ဘူး။ ဆိုင်က ဖွင့်ကာစမို့လို့ ရေမွှေးတစ်ဘူးဝယ်တိုင်း နောက်သုံးမျိုးကို လက်ဆောင်ပေးတယ်တဲ့။ သုံးလလောက်နေလို့ တစ်ခါလောက် သွားလည်း လက်ဆောင်ပေးတုန်းပဲ။ တစ်နှစ်လောက်နေလို့ နယ်တစ်ခါပြန်ရင်လည်း ပေးလို့ မပြီးသေးဘူး။ အဲဒီဘက်က တောသူတောသား နယ်သူနယ်သားတွေများတော့ ဝယ်ကြမှာပေါ့။ ရက်လွန်တွေဖြစ်နေပြီး ဥပါဒ်ဖြစ်ရင်တော့ ဒုက္ခပဲလို့ အမြဲတွေးမိတယ်။
ဂိုဒေါင်က ရှင်းလေ ရှုပ်လေနေမယ်ထင်ပါ၏။
ကံစမ်းမဲ မက်တာကတော့ အိမ်က အမေက စံတင်လောက်တယ်။ ဟိုတလောက ဝယ်လိုက်တဲ့ကော်ဖီမစ်တွေ
ပြီးတော့ ပြောသေးတာ ညည်းတို့ ညီမနှစ်ယောက်ကို ကားတယောက်တစီးစီပေးချင်လို့ဆိုပြီး။ ကံစမ်းမဲလတ်မှတ်တွေ ပေးတယ် ။ ညည်းတို့ကံကို စမ်းကြတဲ့။ ဖြစ်ပုံများ။ နိုင်ကို မနိုင်တာ။ ဆပ်ပြာတွေလည်း ဝယ်မှ ဝယ်။ 100 လောက်ပေါက်တာကို ပျော်နေတာ။
အဲဒါက လူနဲနဲလေးကိုညာတာ ….။ တီဗွီ ကနေ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးကို ညာနေတာကိုကော ဘာမှမပြောတော့ဘူးလား ဆက်ပြောပါဦး…။ (မြှောက်ပေးတာ)
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက နုသေးတော့ မသူတော်တွေကောင်းစားနေကြတာပါ။
ကတ်စတမ်မာကဲ ကို သေခြာနားမလည်သေးလို့ ညာရနေသေးတာပါ။
ကိုယ်တို့ ပြည်သူတွေကလည်း ကိုဘာလိုခြင်တာလဲ ကိုယ်ဘာကြိုက်လည်း ရွေးချယ်တတ်လာကြပါပြီ။
ကိုယ်လိုခြင်တာကို ကိုရွေးယူ၊ ကိုလိုခြင်တာမျိုးကိုပဲ ကိုယ်ကလည်းပြန်ပေးကြမယ်လေ…..
အောင်မငြီး … အခုမှ ကြည့်မိတယ် … Parenting & Pregnancy ဖြစ်နေပါပကောလား … ကလစ်မှားထောက်မိတာဖြစ်မယ် .. ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ